Sida laga soo xigtay Slack, waxaan wajaheynaa dib u qaabeynta ugu weyn ee lagu sameeyay barnaamijkeeda | Abuurista khadka tooska ah
Slack wuxuu muujinayaa dib u qaabeynta ugu weyn abid
Waxaan nahay taageerayaasha Slack mar walbana oo ay la timaado mid ka mid ah warkan waan ku faraxsanahay waana ay muujineysaa. Markan xitaa more markaan ogaanno in Slack uu shaaca ka qaaday dib u qaabeynta ugu weyn abid fuliyay.
Waxaana laga yaabaa inay u muuqato wax yar oo iska yeelyeel ah, maadaama marar badan aad soo martay xariiqyadan markii qaar badani aysan jeclayn taas dib u naqshadeynta astaanta. Laakiin hubaal kuwa hadda ka shaqeeya guriga waxay noqon doontaa soo dhaweyn weyn in telecommute laga helo waayo-aragnimo isticmaale weyn.
Slack ayaa bilaabay geeyo is-dhexgal dib-u-habeyn leh oo leh dhowr astaamo lagu daray taasna waxaa loogu talagalay in lagu abuuro waxa ay ugu yeereen Slack fudud oo abaabulan. Haddii ay horeyba u ahayd aalad weyn abaabulka iyo maaraynta kooxaha xagga xiriirka, hadda way ka sii badan tahay.
A bar navigation cusub, fayl duminaya si loo abaabulo sheekaysiga iyo waxyaabo kale oo badan. Qeybta cusub ee galka leh oo isku duuban ayaa ka dhigan in haddii aad ka shaqeyneyso mashruuc leh wadiiqooyinkiisa iyo sheekooyinkiisa, ay hadda "ka mid noqon karaan" isla qeybtaas.
Naafada kaliya ee muuqaalkan cusub ayaa ah inay tahay oo keliya heli kara isticmaaleyaasha rukunka. Bar-tilmaameedka cusubi wuxuu leeyahay shaqo raadinta si loo helo wada-hadallo, feylal iyo noocyo kale oo dukumiinti ah. Dhinaca bidix ee kore waxaan ka helnaa badhanka si aad u sameysid taasna waxay kuu oggolaaneysaa inaad wadahadal ka bilowdo meel kasta.
Sidoo kale gudaha Naqshadaynta isku xirnaanta 'Slack' ayaa soo bandhigtay xoogaa "kala dheereyn" u dhexeeya canaasiirta. Daqiiqadahan markay dad badani ka shaqeeyaan guriga iyagoo isticmaalaya Slack oo ah qaab isgaadhsiin, waa daqiiqad aad u fiican dib u qaabayntaan iyo inay kor u qaadeyso khibrada isticmaale ee horeyba u fiicnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Slack wuxuu muujinayaa dib u qaabeynta ugu weyn abid
Aaway daabacaadii Wally coronavirus